Guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare oo maanta ka shiray furitaanka Kalfadhiga 5aad – Kalfadhi
Guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare oo maanta ka shiray furitaanka Kalfadhiga 5aad
Guddiga joogtada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka shiray munaasabadda furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare iyo Ajandaha kulamada ugu soo horreeyo ee Xildhibaanada.
Kulanka ayaa la sheegay in uu shir Guddoomiyay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi C/llaahi waxaana xooga lagu saaray Munaasabadda furitaanka ajandaha ugu soo horreeyo ee fadhiga Baarlamaanka la horgeyn doono markii uu furmo Kalfadhiga 5aad.
Xubno ka qayb galay kulanka ayaa Kalfadhi u sheegay in la’ isku afgartay sida loo qorsheeyay Munaasabadda oo ay ka soo shaqeeyeen Guddi gaar ah oo loo xilsaaray. Senator katirsan Aqalka Sare ayaa sheegay in sidoo kale kulankaan ay Guddiga ku heshiiyeen in ay si dhab ah uga hadlaan Xaaladd Soomaaliya
Waxyaabaha xooga la saari doono oo kulanka lagu soo hadal qaaday ayaa waxaa kamid ah arimaha doorashooyinka degaanada Jubbaland, arimaha amaanka iyo waxyaabo kale oo ay Guddiga go’aamiyeen in Kalfadhigaan xooga la saaro.
Kulanka ayaa waxaa dibad joog ka ahaa Warbaahinta mana jirin wax war ah oo Saxaafadda lala wadaagay markii uu kulanka soo dhamaaday, marka laga reebo hadalada gaarka ah oo ay bixiyeen Senatoro la hadlay Kalfadhi.
Malla xaliyay Khilaafka labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya?
Guddoomiye Cawad oo muqdisho ku soo dhoweeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland